Nyeredzi yekumuka inowedzera kubva mukenza kuburikidza ne libra kune capricorn; nyeredzi yekurara kubva kuCricricorn kuburikidza nenyuchi kusvika kune kenza.
Vol. 6 NOVEMBER, 1907. Nha. 2
CHINHU chinhu chakajairika zvokuti hatiwanzo kana kuti tisingambofungi kuti chinoshamisa chii ichocho kana chikamu chisinganzwisisiki chinowanzovapo muupenyu hwedu. Tinopedza nechetatu cheupenyu hwedu muhope. Kana tagara makore makumi matanhatu takapedza makore makumi maviri ezvo munguva yehope. Sevana isu takapedza zvinodarika chetatu chemaawa makumi maviri nemana ekurara, uye, sevana vaduku, takarara munguva inopfuura hafu yemazuva edu.
Zvose mumatare ese uye umambo hwezvisikwa zvinorara, uye hapana chiri pasi pemitemo yezvisikwa inogona kuita pasina kurara. Zvinhu zvakasikwa zvinorara. Nyika, varume, michero nemaminerari, zvakafanana zvinoda kurara kuitira kuti mabasa avo aende mberi. Nguva yekurara ndiyo nguva yakasununguka inobva pamabasa ekumuka kwake. Mune nguva yekurara kunogadzirisa kukanganisa kwakaitwa kune zvisikwa zvake nekumhanya kukuru, uye kupfeka uye kuputsa kwehupenyu.
Isu tisingatenderi kurara nekuda kwezvikomborero zvatinowana kubva ikoko. Isu tinowanzozvidemba nguva yatinopedza muhope sekunge yakasakara; asi, dai zvisiri zvekurara, hatifaniri kungoita zvisingakwanisi kutakura zvinhu zvedu muhupenyu, asi tinofanira kurasikirwa nezvikomborero zvakawanda zvatinowana kubva munzvimbo iyo isingaoneki yatinonyatsoziva nayo.
Kana tikadzidza kurara zvakanyanya, panzvimbo yekuderedza nguva yakarashika, kana kuirega ichi sechakaipa chakakosha, tinofanira kupinda muhukama hukama hwepedyo nenyika ino isingaoneki pane iyo yatinomira iye zvino, uye izvo zvatinofanira kudzidza kubva nayo zvinogona kutsanangura zvizhinji zvezvinoshamisa zvehupenyu huno.
Iyo periodicity yekurara nekumuka ndeyekufananidzira kwehupenyu uye shure kwekufa kunotaura. Upenyu hunomuka hwezuva hunomiririra hupenyu humwe pasi pano. Kumuka kubva kurara usiku nekugadzirira basa rezuva kunofananidzwa nehuduku hwako uye kugadzirira kwebasa rehupenyu. Zvadaro zvinouya zvido, mabasa uye mabasa ehupenyu hwemusha, hupenyu hwebhizimisi, hurumende uye hurumende, uye zvakare kukwegura. Mushure mezvo zvinosvika kurara kwenguva refu kwatinoti rufu, asi izvo chaizvoizvo zororo uye kugadzirira kune rimwe basa rehupenyu, kunyange sekurara kunotigadzirira zuva rinouya. Mukurara kwakadzika hatinorangariri chinhu chehupenyu hwezuva, kuzvitarisira kwomuviri, uye kwete kusvikira tadzokera kuhupenyu hwekuming izvi zvinotarisirwa zvakare. Isu takafa kunyika iyo patinenge takarara zvakadzama sekuti mutumbi waiva muguva kana kuti wakashandurwa kuva madota.
Izvo zvinotibatanidza zuva rimwe nerimwe chimiro chemuviri, pane izvo zvinofadza zvinguva zvezuva rakapfuura. Saka kana mushure mokurara tinowana mifananidzo iyi kana zvinguva zvatinotarisira isu pachikumbaridzo chehupenyu, uye tichizviziva sezvedu isu tinopfuurira chivako chemufananidzo wedu. Kusiyana pakati pekufa uye kurara maererano nenyika ino ndeyokuti tinowana mutumbi wakamirira isu patinodzokera kunyika mushure mekurara, asi mushure mekufa tinowana muviri mutsva watinofanira kudzidzisa nekuvandudza panzvimbo yekuve wakagadzirira kuti tive pedyo shandisa.
Atomu, mamolekemu, masero, nhengo uye muviri wakarongeka, mumwe nomumwe anofanira kunge ane nguva yekuzorora uye akarara kuitira kuti sangano rose rirambe rakadaro. Mumwe nomumwe anofanira kunge ane nguva yekuzorora maererano nemabasa ayo.
Zvinhu zvose zviri muchadenga zvinonzwisisa, asi chimwe nechimwe chinoziva ndege yayo, uye maererano nehuwandu hwemabasa ayo. Muviri womunhu sewese une chirevo chekuziva chinosungirirana, chinotsigira uye chinopinda nhengo nhengo dzomuviri. Nhengo imwe neimwe yomuviri ine nheyo yekuziva iyo inobata uye inosanganisira masero ayo. Sero rega rega rine chimiro chekuziva icho chinomira mukugadzira mamolekoro mukati memharaunda yayo. Molekemu mumwe nomumwe ane chizivo chaicho chinokwezva maatomu kubva muzvinhu zvayo uye anozvichengetedza. Atomu imwe neimwe ine chimiro chekuziva iyo ndiyo mweya wechinhu chayo. Asi atomu inoziva seatomu chete kana inoshanda seatomu pane ndege yeatomu maererano nemhando yeatomu iyo, uye muatomic chinhu chayo. Semuenzaniso, ndege yechiratidzo cheatomu yekodhi ndiyo inonyatsoziva yemamiriro ezvinhu, asi rudzi rwemhando yekuti chizivo chechikamu ndeche carbon, uye chiyero chayo sechizivo chekutanga chinokonzerwa nekushanda kwayo basa sechikamu chekoni. Saizvozvowo zvose zvisikwa chimwe nechimwe chayo chairo chaanoziva icho chiri mudzimu wech element. Saizvozvowo iyo atomu inoramba ichiri muzvinhu zvayo iyo inotungamirirwa zvachose nechokuziva mumamiriro ezvinhu iyo iyo ndeyayo, asi kana inopinda mukubatanidzwa nemaatomu ezvimwe zvikamu, inodzorwa nekubatanidza chirevo chekuziva zvakasiyana nezvayo, zvakadaro seatomu kabhoni inogadzira basa rekhabhoni.
Atomu ndiyo inonzi indivisible particles yemweya-iyo inopinda mubatanidzwa maererano nemazwi anozivikanwa ekugadzira kana maitiro. Izvo zvinozivikanwa zvema molecule zvinoshanda sechigadzirwa kana chimiro. Ichi chinoziva chekugadzira kana chimiro chinokwezva maatomu anodikamwa pakugadzirisa kwayo, uye maatomu, mumwe nomumwe achiita maererano neshoko rake kana kuti kuziva, kuteerera mutemo wekukwezva uye mumwe nomumwe anopinda mukubatanidzwa nekugadzirwa, kutungamirirwa uye kuendeswa mberi iyo inoziva pfungwa yeiyo molecule. Iyi ndiyo simba rinotungamirira muumambo hwose hwemaminerari, iyo ndiyo danho rekupedzisira kubva pasi risingaoneki zvenyama kune nyika inooneka yepanyama uye nhanho yekutanga kusvika kune inooneka mumuviri. Icho chizivo chekugadzira kana chimiro chaizoramba chiri chakafanana kana chisingaiti chekuziva kwehupenyu, iro basa rauri kuwedzera, kukura. Icho chirevo chehupenyu chinomhanyisa kuburikidza ne molecule uye chinoita kuti icho chiwedzere uye chikure, naizvozvo maitiro uye kuronga kwema molecule zvishoma nezvishoma zvinopinda mukugadzirwa uye maitiro echitokisi. Basa rekuziva pfungwa yesero ndiro upenyu, kukura, kukura. Icho chirevo chechimiro chido. Izvi zvinoda mapoka masero pamwe chete, zvinowedzera kune zvinhu zvose izvo zvinouya pasi pesimba razvo uye zvinopesana nezvose zvinoshanduka kunze kwezvazviri. Basa rekuziva pfungwa yezvikamu zvose chido; nhengo imwe neimwe inoshanda maererano neyokuita kwayo inoziva nheyo uye inopesana nekuita kwezvimwe nhengo dzose kuitira kuti, sezviri mumamiriro eatomu ezvikamu zvakasiyana zvichiita pamwe pasi pechirangariro chema molecule iyo yakavabata muchimiro, pane ikozvino kurongedza pfungwa yehumiro yemuviri, iyo inobata nhengo dzose pamwe chete maererano nemumwe. Kubatanidza hutano hwemufananidzo wemuviri pamwe chete unotonga nhengo uye unovakumbirisa kuti vaite pamwe chete, kunyange zvazvo mumwe nomumwe achiita maererano neanozviziva. Nhengo imwe neimwe iyo inobata masero ayo ayo akabatanidzwa pamwe chete, imwe neimwe yemasero inoita basa rayo rakasiyana muchikamu. Sero rega rega rinotungamira mamolekemu mukati mawo; molekoro imwe neimwe inobata maatomu ayo ayo akanyanyogadziriswa, uye atomu imwe neimwe inoita maererano neshoko rayo rinotungamirira, iro ndiro rinotaridzirwa.
Nokudaro tine muviri wemhuka yemuviri kusanganisira humwe humwe hutongi hwezvinhu zvakasikwa: the elemental inomiririrwa neatomu, molecule inomira semarara, masero ari kukura semiriwo, nhengo inoshanda semhuka, imwe neimwe maererano nemamiriro ayo. Zano rimwe nerimwe rinoziva rinoziva basa rayo chete. Iatomu haisi kuziva basa reiyo molecule, iyo molecule haisi kuziva basa rekamuri, sero hairi kuziva basa remugariro, uye nhengo haina kunzwisisa mabasa esangano. Nokudaro tinoona mazano ose anoziva achiita zvakanaka mumwe nomumwe pangoro yake.
Nguva yekuzorora kweatomu ndiyo nguva iyo pfungwa yekuziva yemarara inopera kushanda uye inosunungura atomu. Nguva yekuzorora kwema molecule inouya apo pfungwa yekuziva yehupenyu inobviswa uye inogumira kushanda uye apo hupenyu huri kubviswa iyo molecule inoramba iripo. Nguva yekuzorora kwekamuri inosvika apo chizivo chekufunga chechido chinogumisa kupikisa kwayo. Nguva yekuzorora kwechirongwa ndiyo nguva iyo kugadzirisa pfungwa inozivikanwa yemuviri kunogumira basa rayo uye inobvumira nhengo dzese kuti dziite nenzira yayo pachayo, uye zorora kuti kuwirirana kwemuviri kunouya apo pfungwa yekuziva yevanhu kunotsvaga kubva kune kutonga kwemuviri uye kuchibvumira kuti uzorore muzvikamu zvayo zvose.
Kurara ndechimwe chinhu chakakwana chechirevo chaicho chaicho chinotungamirira hupenyu kana chinhu mune humwe umambo hwechisikigo. Kurara ndechokuti mamiriro ezvinhu kana chimiro chechizivo chekuziva, iyo inogumira kuita pari payo pachayo pachayo, inodzivisa masimba kubva pakuita.
Kurara kurima. Mumunhu, kurara, kana rima, iyo inoshanda yepfungwa iyo inowedzera simba rayo pane mamwe mabasa uye masimba uye inodzivirira maitiro avo.
Apo pfungwa iyo ndiyo inotungamirira pfungwa inozivikanwa yemuviri wemuviri wemhuka iri kuita kuburikidza kana nemuviri iwoyo, zvikamu zvose zvemuviri, uye semunhu wose, zvinopindura kune pfungwa dzepfungwa, kuitira kuti kana pfungwa dzichikwanisa, ruzivo uye mafungiro zvinochengeterwa kushandiswa uye vose vanodzoka zvakare nevashumiri mumuviri vanofanira kupindura. Asi muviri unogona kungopindura kwenguva.
Kurara kunouya apo madhipatimendi akasiyana emuviri aneta uye aneta nokuita kwezuva uye haakwanisi kupindura mazano epfungwa, uye kuitira kuti basa repfungwa iyo yakarara inokonzerwa. Pfungwa yekufunga iyo inorasikirwa nemasimba ayo. Masimba haakwanisi kudzora masimba epanyama, maziso epanyama anogumira kubata nhengo, uye muviri unonyura mukati. Apo pfungwa yekuziva kwepfungwa yakamira kushanda kuburikidza nehutano hwepfungwa uye yakabvisa kubva muminda yavo yezviito, kurara kwakaitika uye pfungwa yekuziva haina kuziva nyika inonzwisa tsitsi. Muhope, pfungwa yekuziva yevanhu inogona kunge yakaderera uye yakafukidzirwa mukusaziva kwerima kana kuti ingadaro iri kushanda pane ndege inopfuura hupenyu hunofadza.
Chinokonzera kubviswa kwechirevo chekuziva chichaonekwa nekudzidza kwehupenyu hwekurara. Mamolekemu oga oga, sero, nhengo yemuviri uye muviri wose zvakakwana, unoita umwe neumwe basa rawo; asi mumwe nomumwe anongoshanda chete kwenguva yakati, uye nguva inotarirwa nebasa reumwe neumwe. Apo kuguma kwenguva yebasa kunosvika, hakwanisi kupindura kune simba rinotungamirira pamusoro paro, kusakwanisa kwaro kushanda kunozivisa kukurudzira kwesimba rekushaya kwake uye kukanganisa mukudzoka kwekutonga pfungwa iri pamusoro payo. Mumwe nomumwe achiita maererano nehupenyu hwahwo, maatomu, maserolekisi, masero nhengo nhengo mumuviri wemhuka, anozivisa mutungamiri wekutarisana unoziva maitiro emuviri wenguva yekuzorora sezvinorayirwa nemhando yega yega, uye Chimwe nechimwe chinotungamira chirevo chinovhara simba chayo chinobvisa simba rayo uye chinobvumira mumwe ari pasi apa kuti agare. Izvi ndizvo zvinoitika mune izvo zvinonzi kurara kwepanyama.
Icho chirevo chevanhu chinogadziriswa mumusoro, kunyange chichienderera mumuviri wose. Kunyange zvazvo inoramba iri mumusoro munhu haana kurara kunyange zvazvo angave asingazivi zvinhu zvakapoteredza, uye muviri unonyatsosununguka. Icho chinoziva kuti munhu anofanira kusiya musoro uye kunyura mumuviri asati avata. Mumwe anoramba akasimba paanenge akagara kana kuti akagara pasi haana kurara. Mumwe anorota, kunyange zvazvo muviri wake wakanyarara, hausi kurara. Kurara kune munhuwo zvake ndiko kukanganwa zvakakwana kwezvose.
Chiratidzo chokutanga chekuda kwekurara ndiko kusakwanisa kubhadhara, ndokuuya kuzora, kusarura kana kusvibiswa kwomuviri. Mishonga yacho inosununguka, maziso evhara, maziso eziso anobuda. Izvi zvinoratidza kuti chirevo ichi chakanga charega kupa simba pamusoro pemisungo yomuviri. Izvo zvinofungwa nemunhu zvino zvinodonha kubva pachigaro chayo chemuviri mumuviri wepituitary, iyo ndiyo nzvimbo inodzora yenheyo yenhengo yemuviri wenyama, kana kuti iyo nzvimbo yakaneta zvokuti haigone kuteerera. Zvino kana pasina chimwe chinhu chokuwana chido chepfungwa, chinosiya chigaro chayo chekutonga mumutumbi wepituitary, uye urongwa hwekutya hunodzosera zvachose.
Kana kukanganwa kwezvinhu zvose kunouya ipapo mumwe anganzi anonzi akarara, asi kana imwe nhengo-yekuti inoziva iripo, kana kuti kurota kwemhando ipi zvayo inowoneka, ipapo kurara hakuna kuuya, nokuti pfungwa yekuziva kwepfungwa ichiri mumusoro uye iri kutorwa pamwe nemafungiro ekuzviisa pasi pane chinangwa, iyo inongova imwe chete inotora kurara.
Mukurota, pfungwa inozivikanwa inobatanidza nemitsipa yeropa inokanganisa ziso, nzeve, mhino, nemuromo, uye kurota kwezvinhu zvine chokuita nemanzwi aya. Kana imwe chikamu chemuviri chakatambudzwa, chirwere, kana chakakuvadzwa, kana basa rakanyorerwa pairi, rinogona kutora pfungwa yekuziva uye kukonzera kurota. Kana, somuenzaniso, kune marwadzo mutsoka, iyo ichakanganisa iyo inowirirana nzvimbo muuropi, uye izvi zvinogona kukanda zvifananidzo zvekunyanyisa pamberi pechirevo chepfungwa maererano nechikamu chakakanganiswa; kana kana zvokudya zvichidyiwa izvo dumbu risingakwanisi kushandisa, zvakadai sa welsh rarebit, uropi huchabatwa uye mhando dzose dzezvifananidzo zvisingatauriki zvingave zvataurwa kune pfungwa. Chirevo chega chega chine nhengo chaiyo mumusoro, uye pfungwa inoziva inobatanidza nematunhu aya kuburikidza nematambudziko anotungamirira kwavari, uye nehukama hukama. Kana chimwe chezvikamu izvi chikaitwa, vanocherechedza pfungwa iyo, uye kurara hakuzouya. Kana munhu akarota, chirevo ichi chiri mumusoro, kana kuti chakadzokera kune chikamu ichocho chemutsipa wepelinha chiri mumuromo wechibereki vertebrae. Nokuda kwekurota kumwe kurota kwemazuva ose, pfungwa yekuziva haisi yepamusoro pemutsipa wepelinha kumusoro wepamusoro wekervical vertebrae. Sezvo pfungwa yekuziva inobva kubva kune yekutanga yemirairo yomudzimai, inoguma kurota; pakupedzisira nyika uye pfungwa dzinopera uye kurara kunowanikwa.
Pangokunge pfungwa yekuziva yemunhu ichibviswa kubva mundiro yepanyama, magnetic currents enyika uye nharaunda dzakapoteredza dzinotanga basa ravo rokugadzirisa maviri uye zvikamu zvemuviri. Nemisungo yakasununguka, uye muviri wakasununguka uye munzvimbo yakakodzera yekurara, magetsi uye magnetic currents vanogadzirisa uye vanodzorera muviri uye nhengo dzaro kuhutano hwakanaka.
Kune sayenzi yehope, iyo ivo ruzivo rwemitemo inodzora muviri muhukama hwayo nepfungwa. Avo avo vanoramba kutevera murairo wehope vanorayira zvikwereti nehutano husina kunaka, zvirwere, kushaya mutsinye, kana kunyange rufu. Zvinhu zvinorondedzera nguva yekurara, uye nguva ino inotarirwa nezvisikwa zvaro zvose kunze kwevanhu. Asi munhu kazhinji anozvidza mutemo uyu sezvaanoita vamwe, paanenge achiedza kutevera zvaanoda. Ukama hunoenderana pakati pomuviri nepfungwa hunounzwa nehope dzese. Kurara kunowanzoitika kunobva kuneta kwepanyama kwemuviri uye kunounzwa nenzvimbo yakakodzera yokurara uye mamiriro epfungwa yapfuura kurara. Sero rimwe nerimwe nechikamu chemuviri, pamwe chete nemuviri pachawo, inorondedzerwa. Mimwe mitumbi inofadza zvikuru mune zvavanoita, dzimwe dzakaipa. Izvo maererano nesangano remuviri sokuti ndeipi nzvimbo iyo ndiyo yakanakisisa yokurara.
Munhu mumwe nomumwe, saka, anofanira, panzvimbo yekutevera chero mitemo yakagadziriswa, ona nzvimbo yakakosha kuti musoro wake urere uye mune rutivi rwomuviri kurara. Munhu mumwe nomumwe anofanira kuziva nyaya idzi kuburikidza neruzivo kuburikidza nekubvunzurudza nekubvunza kwemuviri pachake. Iyi nyaya haifaniri kutorwa sechinhu chinokuvadza, uye yakagadzira fad, asi yakatarisa nenzira inonzwisisika uye yakatarisana nechinetso chero chipi zvacho chinofanira kunge chiri: Kugamuchirwa kana chiitiko chekutonga, uye chikarambwa kana chisina musoro, kana kana zvinopesana zvichiratidzwa .
Kazhinji, miviri yakagadziridzwa yakanaka inoputirwa kuitira kuti musoro ufananidze kuchamhembe, uye netsoka kumaodzanyemba, asi ruzivo rwakaratidza kuti vanhu, zvakaenzana sehutano, vakarara zvakanakisisa nemusoro unotarisa mune imwe yemamwe mazano matatu.
Paanenge akarara muviri hauna kuchinja maitiro ayo kuti uzvibatsire kune zvakapoteredza uye kune magnetic currents inowanika. Kazhinji, hazvina kunaka kuti munhu aende kunorara avete shure, sezvo nzvimbo yakadaro inobva mumuviri wakazaruka kune zvakawanda zvinokuvadza, asi kune vanhu vanovata zvakanaka kana vakarara pamasana avo. Zvakare zvakataura kuti hazvina kunaka kurara kurutivi rworuboshwe nokuti pane ipapo kuomesa mwoyo kunopindira nekupararira kweropa, asi vakawanda vanoda kurara kuruboshwe uye havawani kushaya kukwanisa kuwedzera ikoko. Anemic vanhu vane mudziyo masvingo vakarasikirwa nenzwi ravo, kazhinji vanorwadziwa mushure mekumuka mangwanani. Izvi zvinowanzokonzerwa nekurara mushure. Naizvozvo, muviri, unofanirwa kufadzwa nemafungiro ekutama kana kuchinjwa pachako usiku hunoenda kunzvimbo iyo ichaita kuti zvive nyore uye kunyaradza.
Mvura miviri yehupenyu inofanirwa kuita zvikurukuru nechinoshamisa chekumuka nekurara. Aya ndiwo mazaya ezuva nemwedzi. Munhu anofema kuburikidza nemhino imwe panguva imwe. Kwemaawa anenge maviri masikati anouya anouya nemhepo inofema inoyerera mumhino yakarurama kwemaawa maviri; ipapo pane nguva yekuenzanisa kwemaminitsi mashomanana uye kufema kunoshanduka, uye ikozvino magetsi anofambisa mweya unofamba uchienda kuruboshwe rwemanheru. Izvi zvinoputika kuburikidza nemhepo inofema inoramba ichishandura muupenyu hwose. Ivo vane simba pahope. Kana pakubvisa mweya uchisvika uye uchipfuura nepanhizha yakasara, huchawanikwa kuti nzvimbo inonyatsokwanisa kurara ndeyokurara kune rumwe rutivi, nokuti ichabvumira kufema kwemwedzi kutenderera kusinganzwisisiki kuburikidza nemhino yakasara. Asi kana, pane kudaro, munhu anofanira kunge akarara kurutivi rworuboshwe, zvichawanikwa kuti izvi zvinochinja ikozvino; kufema kunoguma kuyerera kuburikidza nemhino yakasara uye panzvimbo pacho kunotenderera kuburikidza nemhino yakarurama. Kuwedzerwa kwemvura kunowanikwa kuitika nokukurumidza iyo nzvimbo inoshandurwa. Kana munhu asingakwanisi kurara ngaaite kuti achinje nzvimbo yake mubhedha, asi regai aongorore muviri wake pamusoro pekuti unoda kureva nhema sei.
Pashure pokurara kunozorodza, matanda emasero ese omumuviri anotarisa munharaunda imwechete. Izvi zvinobvumira magetsi uye magnetic currents kuti apinde mumasero akafanana. Asi sezvo zuva rinovhara kunze pfungwa dzinochinja kutungamira kwemapuranga emasero, uye usiku haisi nguva dzose dzemasero, nokuti dzinotarisa kumativi ose. Kuchinja uku kwechirwere kunodzivisa kuputika kwehupenyu hwehupenyu, uye apo pfungwa inochengetedza chigaro chayo chekutonga mukati mehutachiona, muviri wepituitary, urongwa huno hunoita kuti muviri usasununguka uye uchibvumira magnetic currents kuti iwedzere masero . Kurara naizvozvo zvinodiwa kuti kudzorera masero panzvimbo yavo yakarurama. Mukurwara masero ari, mune chikamu kana muviri wose, zvinopesana.
Uyo anoda kurara zvakanaka haafaniri kurega kubva pakarepo mushure mekunge apopotedzana mubvunzo, kana kuti akabata munhaurirano inofadza, kana kuti akapinda mukukakavara, kana kana pfungwa dzikagumburwa, yakatsamwirwa, kana kuti inotora chimwe chinhu chokuwana chido, nokuti ipapo pfungwa ichabatanidzwa zvakanyanya zvokuti inotanga kuramba kurega nyaya yacho uye zvichizoita kuti nhengo nenhengo dzomuviri dzirege kuzorora nekuwana zororo. Chimwe chikonzero ndechokuti mushure mokunge pfungwa dzakatora nyaya yacho kwechinguva, zvakaoma zvikuru kuti ibve pairi, uye maawa akawanda eusiku angashandiswa mukuedza asi asingakwanisi "kuenda kunorara." Kana pfungwa zvakanyanya kutorwa nehurukuro, imwe imwe nyaya yekufunga yepikisi yakasiyana inofanira kuiswa, kana bhuku rinoverengwa kusvika kutorwa kunotorwa kubva munyaya inonakidza.
Mushure mokunge musununguka, kana mumwe asina kutombotanga pane chinzvimbo chakanaka pamubhedha, anofanira kunge akarara kuruboshwe rworudyi munzvimbo yakanyanyisa uye yakasununguka, achizorodza misi yese uye achirega chikamu chimwe nechimwe chemuviri chichiwira munzvimbo yakasikwa. Mutumbi haufaniri kutaridzwa kunotonhora, kana kuputika, asi inofanira kuchengetwa pachitonho chemafaro. Ipapo mumwe munhu anofanira kunzwa nemutsa mumoyo make nekuwedzera manzwiro mumuviri wose. Zvikamu zvose zvemuviri zvichabvuma uye zvinofadza nekudziya kwakanaka uye kunzwa. Kana chirevo ichi chisingazove chichizororazve muhope, zvidzidzo zvakawanda zvinogona kuedzwa kukurudzira kurara.
Imwe yenzira dzinowanzoshandiswa pakukurudzira kurara ndeyekuverenga. Kana izvi zvakaedzwa mumwe anofanira kuverenga zvishoma nezvishoma uye kududzira nhamba imwe neimwe mupfungwa kuitira kuti inzwisise kukosha kwayo. Izvi zvine mhedzisiro yekunetsa uropi nehuwandu hwayo. Nenguva iyo imwe zana nemakumi maviri nemashanu inosvika kurara ichave yakatevera. Imwe nzira uye imwe iyo inofanira kuva yakakosha kuti ive nesimba yakasimba pamwe chete nevanhu vasina kunaka, kuedza kutarisa kumusoro. Mafungiro anofanirwa kuvharwa uye meso akatendeuka kumusoro kuitira kuti atarise pamusoro peimwe masentimita kumusoro uye shure kwemukati wemhino. Kana munhu akakwanisa kuita izvi zvakakodzera, kurara kazhinji kunouya mumaminitsi mashomanana, uye kazhinji mumaminitsi makumi matatu. Izvo zvinogadzirwa nekushandura maziso kumusoro ndeyekubvisa mhuka yepfungwa kubva mumuviri wenyama. Pakarepo kana kutaridzirwa kwakashandurwa kuchimiro chepfungwa chimiro chakarasika kuona. Zvadaro kurota kana kurara zvinotevera. Asi nzira yakanakisisa uye iyo iri nyore ndeyokuva nechivimbo mumunhu kukwanisa kurara uye kukanda masimba anoparadza; kuburikidza nechivimbo ichi uye nekunzwa nemutsa mumoyo wekurara kunotevera nokukurumidza.
Pane chimwe chinhu chinoshamisa chinowanzosangana nehope. Kuremekedza kwakaderera, uye panzvimbo yekufema kubva mudumbu remunhu, munhu anofema kubva munzvimbo inonzi thoracic. Izvo zvinotapira slackens uye chiito chemoyo chinowedzera. Muzviitiko zvizhinji zvakawanikwa kuti pane kuchinja kwehukuru hwemuviri panguva yekurara. Dzimwe nhengo dzomuviri dzinowedzera muhukuru, asi zvimwe zvikamu zvinoderera. Izvo zvipfeko zvemuviri zvemuviri zvinowedzera, asi midziyo yeuropi inowedzera. Uropi hunova hunocheka uye zvibvumirano panguva yekurara, asi pakudzoka kwechizivo chekuziva, inotora hue hunyanya huno kana ruvara ruddy. Ganda racho rinoshingaira mukurara pane mukusimudza, iyo ndiyo chikonzero chikuru nei mweya muimba yekuvata ichiva isina kuchena zvakanyanya kupfuura panguva yekumuka; asi apo ganda rinoputirwa neropa, nhengo dzomukati dziri munharaunda yeanemia.
Chikonzero chekusiyana kwehukuru mune zvikamu zvemuviri ndechokuti, kana chirevo chekuziva chichibvisa kubva muuropi, chiito cheuropi chinopera, kupararira kweropa kunoderera, uye, sechimiro chebasa chekuziva, uropi ikozvino huzorora. Hazvina kudaro nekunze kwemuviri. Chikonzero cheizvi ndechokuti sezvo mutariri wemuviri, iyo inofunga, inotora basa uye nhengo dzaro dzinoshanda dzinoramba dzichizorora, kurongedza kuziva kwechimiro chemuviri wemutumbi kunotora uye kunodzivirira muviri pamusoro pengozi dzakawanda iyo inoratidzwa panguva yokurara.
Nokuda kweizvi njodzi dzakawanda ganda rinowedzera kupararira rinoita kuti rive rakanyanyisa kune zvinokonzera kupfuura panguva yekumuka. Mumamiriro ekusimudza mhepo yemotokari uye mitsipa yokuzvidira ine mutoro wemuviri, asi apo iyo pfungwa yekuziva yevanhu yakasimuka, uye mamiriro emagetsi anokonzera zvinotenderera nemisungo nemafambiro emuviri zvakasununguka, mitsipa isingabatsiri uye misumbu yemuviri inotamba. Ichi ndicho chikonzero mutumbi uri pamubhedha unotama kubva pane imwe nzvimbo kuenda kune imwe, pasina rubatsiro rwechirevo chevanhu. Nhengo dzisingabatsiri dzinoita kuti muviri uite sezvinosimbiswa nemitemo yepanyama uye kugadzirisa muviri kune mitemo iyi.
Rima rinowedzera kukanganisa kurara nokuti mitsipa yechipfuva chemuviri haisvibwi murima. Chiedza chinoshanda pamisungo chinopa maonero kuuropi iyo inogona kuratidza maitiro mazhinji ehope, uye kurota kunowanzowanzoguma nemubvumo, kana chiedza chinoshanda pamuviri. Chero mhere-mhere, kubata kana kubuda kwekunze, kamwechete kunounza kuchinja kwehukuru nekupisa kweuropi.
Kurara kunokonzerwa nevanorcotics. Havatauri kurara hutano hwakanaka, sezvinongoita nharo kana zvinodhaka zvinokonzera mitsipa uye inovadzivisa kubva padzidziso. Zvinodhaka hazvifaniri kushandiswa kunze kwezviitiko zvakanyanya.
Kurara zvakakwana kunofanira kupiwa muviri. Nhamba yeawa haikwanise kuiswa nekutendeseka. Dzimwe nguva tinonzwa tichizorodzwa zvakare mushure mokurara kwemaawa mana kana mashanu pane zvatinoita pane dzimwe nguva kubva kaviri nhamba. Murairo chete unogona kuteverwa nekureba kwehope ndeyekusiya pamba nenguva yakakodzera uye kurara kusvikira muviri uchisimuka woga. Kunyengera kumuka pamubhedha hakuwanzobatsiri uye kazhinji kunokuvadza. Nguva yakanakisisa yokurara, zvisinei, ndiyo maawa masere kubva pamakumi matatu manheru kusvika pamatanhatu mangwanani. Panenge anenge gumi o'clock magnetic current yenyika inotanga kutamba uye inopedza maawa mana. Munguva ino, uye kunyanya mumaawa maviri okutanga, muviri unowanzosangana nezvino uye unogamuchira ruzivo rwakanyanya kune iyo. Pakati pa AM AM imwe yemazuva ano inotanga kutamba iyo inopomera mutumbi nehupenyu. Ikozvino inopfuurira kwemaawa anenge mana, kuitira kuti kana nguva yekurara ikatanga paawa gumi, nemaviri ose masero uye zvikamu zvemuviri zvaizove zvakasununguka uye zvishambidzwa nemusinga magnetic current; pane maviri magetsi emhepo achazotanga kukurudzira uye kukurudzira muviri, uye nechitanhatu o'clock masero emuviri achave akapiwa mhosva uye achisimbiswa sekuita kuti aite chiito uye anozviti ivo vanoziva pfungwa yepfungwa .
Kurara uye kusuruvara hazvina kusimba, nokuti kana muviri uchiramba uchishanda uye unotungamirirwa uye uchitungamirirwa nemanzwiro ekuzvidira nemasumbu, zvakasikwa hazvigoni kubvisa uye kubvisa zvakasvibiswa, kana kugadzirisa kukanganisa kwakaitwa mumuviri nekupfeka kwehupenyu hunoshanda. Izvi zvinogona kuitika chete apo mitsipa isingabatsiri uye mitsipa inodzora muviri uye inotungamirirwa nemafungiro evanhu.
Kunyanyisa kurara kwakaipa sezvisingakwani kurara. Vaya vanogara muhope dzakanyanyisa kazhinji vane pfungwa dzisina kuchena uye dzine usimbe uye vanhu vane usimbe, vasina njere, kana vanowedzera vanofarira kurara nekudya. Mafungiro asina simba anoneta nyore nyore uye chero upi noupi huchaita kuti munhu arara. Vaya vanogona kurara zvakanyanya vanozviitira kukuvadza, sezvo kurara kwakanyanyisa kunoenderana nekusaita kwezvikamu zvepamusoro uye masukisi emuviri. Izvi zvinotungamirira pakukanganisika, uye zvinogona kutungamirira kumigumisiro yakakomba. Iyo inokonzera kumira kwechiito chenduru, uye panguva yekudzika kwe bile iyo zvikamu zvemuviri zvinoshandiswa. Kunyanyisa kurara, kuburikidza nekukanganisa inzwi rechinotyisa, rinotanga kukura kuvimbiswa.
Kunyange vakawanda vachifunga kuti vanorota munguva yavo yose yehope, dzakadaro hazviwanzo zvakadaro, uye kana zvakadaro, vanomuka vakaneta uye havagutsikani. Kune avo vanorara zvakanaka kune nguva mbiri dzekurota. Chokutanga ndechokuti ruzivo rwepfungwa nemanzwi ari kunyura mukati mekuita mhirizhonga; izvi zvinowanzotora kubva kumasekondi mashomanana kusvika kune imwe awa. Nguva yechipiri ndeyekumuka, izvo zviri, pasi pemaitiro akafanana, kubva pamasekondi mashomanana kusvika hafu yeawa. Izvozvo zvinoratidzika urefu hwechiroto zvachose hazvirevi nguva chaiyo inopedzwa, sezvinenge nguva muchiroto zvakasiyana zvikuru kubva munguva sezvatinoziva mumamiriro ekumutsa. Vakawanda vakaona kurota izvo muhope dzacho zvakatora makore kana hupenyu hupenyu kana kunyange nemakore kuti vapfuure, apo mararamiro akaonekwa achikwira nekuwa, uye akarota akararama zvakasimba sekunge asina kunyunyuta, asi paakamutsa akawana kuti makore kana makore akanga achingova mashoma mashoma kana maminitsi mushure mezvose.
Chikonzero chekusawirirana kwehurefu hwehope ne nguva sezvatinoziva, ndeyekuti takadzidzisa nhengo dzedu dzekuona nemuitiro wekufungidzira nzvimbo uye nguva. Izwi rekuziva riri kuitwa munyika inotenderera rinoona hupenyu husingagumi, asi nhengo dzedu dzinofungidzira nguva uye kure nekupararira kweropa, uye kupararira kwemvura inotyisa, sezvakashandiswa kune dzimwe nyika. Kurota kunongova kubviswa kwechirevo chekuziva kubva kushanda kuburikidza nhengo dzekunze dzenyama kunze kwendiza chaiyo kumabasa ayo kuburikidza nhengo dzomukati dzepfungwa dzepfungwa. Iyo nzira uye ndima inogona kuonekwa nezwi rekuziva apo pfungwa dzadzidza kuti zvingazviparadzanisa sei kubva kune nhengo nemanzwi emuviri.
Muviri pamwe chete ndeyeumwe, asi unoumbwa nemitumbi miviri, imwe neimwe yechiratidzo chepfungwa yakasiyana neyeimwe. Pano pane nyaya yeatomu iyo muviri wose unovakwa, asi akabatanidzwa maererano neshoko rekugadzira. Ichi ndicho muviri usingaoneki. Ipapo kune chimiro chema molecular, iyo inonzi astral design principle maererano nemaatomu akabatanidzwa uye inopa fomu kumunhu wose. Zvadaro pane muviri wehupenyu, unova muviri wepfungwa unotapudza kuburikidza nemuviri wemakemikari. Imwezve ndeyomuviri unofarira uyo uri musingaoneki muviri unobata muviri wose uri mberi. Mukuwedzera kune izvi kune muviri wemafungiro, uyo wakaita sechiedza chinopenya mukati uye kuburikidza nezvose zvataurwa kare.
Zvino kana pfungwa yekuziva kana muviri wepfungwa iri kushanda kuburikidza nemanzwiro munyika ino, sechimiro chechiedza icho chinoshandura chiedza chazvo kune dzimwe mimwe miviri uye chinovhenekera kuburikidza uye chinokurudzira ivo uye pfungwa uye nhengo dzekuita. Mumamiriro ezvinhu akadaro munhu anonzi ave akamuka. Apo chiedza chemuviri chepfungwa chakashandurwa kwenguva yakareba, yose yemitumbi yakadzika inokundwa nechiedza uye haigoni kupindura. Kusvikira panguva ino ivo vakanyatsotaridzirwa kuchiedza chemuviri wepfungwa uye iko zvino vanobva vachinjwa uye chiedza chechiedza chinoshandiswa kune muviri we psychic mutumbi uyo uri chigaro chemukati chekunze kwekunze uye ine pfungwa dzepfungwa dzepfungwa. Ndizvo izvo zvatiri kurota uye kurota kune mhando dzakawanda sekunge kune zvirevo; uye kurota kunobva kune zvikonzero zvakawanda.
Chikonzero chekutambudzika dzimwe nguva nekuda kwekusakwanisa kwezvigadzirwa zvekudya zvekudya, uye chido chekukanda zvifananidzo zvakanyanyisa pauropi, izvo zvinoratidzwa nepfungwa yekufunga; dambudziko rinogona kukonzerwa nokuguma kwekupararira kweropa kana kwehutano hwemitsipa kana kubviswa kwemagetsi emagetsi kubva mumanzwiro anonzwa. Kusunungura uku kunogona kukonzerwa nekudzivirira kwemitsipa kana kuvasiya. Chimwe chinokonzera is incubus inotora muviri. Ichi hachisi kurota kunokonzerwa nehupenzi kana kuti kusinganzwisisiki, asi ndeyemhando yakashata, nekuchengetedza kunofanira kutorwa pamusoro payo, zvisinei kudyidzana kunogona kuva chigumisiro, kana chisina kuchena, uye inozivikanwa kuti njodzi dzakadaro dzimwe nguva dzakaguma rufu.
VaSomnambulist vanowanzoshandisa masimba ose uye mazano ehupenyu hwehupenyu, uye pane dzimwe nguva zvinogona kuratidza kushaya simba kusingaoneki muhupenyu hunomutsa hwe somnambulist. Mumwe munhu angasimuka kubva pamubhedha wake, kupfeka, kusungira bhiza rake bhiza uye kutasva nesimba pamusoro penzvimbo iyo mukumuka kwake haazoedza kuenda; kana kuti angakwira zvakachengeteka pamusoro pemvura yakapetwa kana kuti pamwe nepamusoro pezvenjezheni uko kwaizova upenzi kuti aite kana akasimuka; kana kuti anganyora tsamba uye aite hurukuro, asi mushure mokunge amuka hauzive zvachose chakaitika. Chinokonzera somnambulism chinowanzofanira kugadziriswa kuburikidza nekugadzirisa pfungwa yekuziva kwomuviri wemuviri iyo iyo mitsipa isingabatsiri uye misumbu inosunungura, pasina kupindira kwechirevo chepfungwa. Ichi chigadziro chekuti somnambulistic chinongoguma. Chikonzero chacho ndechokuita kune dzimwe nzira dzefungiro dzakamboitika kare, kana mupfungwa dzemutevedzeri kana kuti dzakataurwa nemafungiro emumwe.
Somnambulism isiri yehutachiona, kazhinji kuitisa mamwe mafungiro akave akafuridzirwa pamhando yemuviri wemuviri, sekuti kana munhu anofungisisa nemaitiro echinhu kana chimwe chinhu anosimbisa pfungwa idzi pamusana kana chimiro chemuviri wake wenyama . Iye zvino kana munhu akafadzwa nemafungiro ake uye akarega basa usiku, hutano hwake hunobuda kubva pachigaro chayo chekutonga uye huri muhuropi uye mitsipa yekuzvidira nemisungo zvinosununguka. Zvadaro ndeyekuti mitsipa isingabatsiri uye misumbu inotora mutoro. Kana izvi zvakagadziriswa zvakakwana nemafungiro anowanikwa kubva mumafungiro ekufunga apo vari mumamiriro ekusimudza, vanoteerera zvese pfungwa idzi kana maitiro sezvinongoita senyaya inonyengedzwa inoteerera mutengi wake. Nokudaro kuti mhuka dzomusango dzinoitwa ne-somnambulist dzinowanzoita rimwe zuva kurota zvakaputirwa pamuviri womuviri panguva yekumuka, zvichiratidza kuti somnambulist inyaya ye self hypnosis.
Asi kuzvipira uku hakusi nguva dzose yekurota kwezuva, kana kurwisana kwemazuva, kana kufunga kwekumutsa hupenyu chete. Pane dzimwe nguva pfungwa yekuziva iri mune imwe yemvura yakadzika inotaura uye inoshandura maonero ehuroto hwakadzika iyo kuratidzira pfungwa yekuziva kwemuviri womufomu. Zvadaro, kana muviri uyu unoshanda pane izvo zvawakagamuchirwa zvakagamuchirwa, zvinoshamisa zve somnambulism zvinoratidzwa mune zvimwe zviitiko zvakaoma uye zvakaoma, zvakadai sezvo zvinoda kushanda mupfungwa mumathematical kuverenga. Izvi ndizvo zviviri zvezvikonzero zvinokonzera somnambulism, asi pane zvimwe zvinokonzera, zvakadai semunhu unhu huviri, kutadza, kana kuteerera kwekutaura kwechido cheumwe munhu uyo ​​kuburikidza ne hypnotism inogona kutungamirira muviri we somnambulist muzviito zvayo zvese.
Hypnosis inzira yekurara inounzwa nechishuvo cheumwe unoita mupfungwa yeumwe. Chiitiko ichocho chinoputira muhope dzepanyama dzinobudiswa zvakagadzirwa nehupnotist. Kune nzira dzakawanda dzinoteverwa nevanopikisa, asi zvigumisiro zvakafanana. Mukufungidzira uyo anokonzera kusuruvara kwemaziso, kusanganisa kukuru, uye nekuratidza, kana nechisimba chinoda iye anomanikidza chirevo chekugadziriswa kubva pachigaro uye pakati peuropi, uye nokudaro ndiko kudzora mitsipa isingabatsiri uye mishonga yemuviri inopera, uye chirevo chekuziva chinodonhedzwa kubva munzvimbo dzayo dzepfungwa uye nzvimbo dzekunzwa, uye inowira muhope huru. Ipapo uyo anotora anotora nzvimbo yeimwe pfungwa uye anotsanangurira kufamba kwemufananidzo wemuviri unotungamirira kufamba kusingabatsiri. Iyi fomu yemutemo inopindura nyore nyore kune fungiro yeanoshandisa kana nyaya yacho yakanaka, uye pfungwa yeanoshandisa iyo iyo automaton yomuviri izvo zvaanoziva pfungwa yepfungwa.
Nyaya inofungidzirwa inogona kuratidzira zvose zvinoshamisa zve somnambulism uye inogona kuitwa kuti iite zvinoshamisa zvinoshamisa zvekutsungirira nokuti iyo hypnotist inogona kugadzira zvinhu zvakadai sezvaanoda kuti zvigadziriswe, asi, kufamba kweomnambambist kunoenderana nemafungiro akapfuura, chero zvingave zviripo. Mumwe haafaniri kutombomira pasi chero mamiriro ezvinhu kana chimiro chinotumirwa kuti chive chisingatauri, sezvo chinowanzoita kuti iye nemuviri wake mutambo weimwe chero ipi zvayo.
Zvinokwanisika kuti munhu abatsire kubva kuzvidzora kana zvichiitwa nekuchenjera. Nokuraira mutumbi kuti uite mamwe maitiro uchaunzwa zvakanyanya pasi pesimba rechikonzero chako, uye zvichava nyore pakufunga kwemashoko kutungamirira zviito zvehupenyu uye zvemuviri kana muviri wakadzidziswa kuti upindure kune pfungwa yekufunga nguva dzose. Rimwe remabasa akadaro riri kumuka mangwanani panguva iyo pfungwa yakaraira muviri kuti umutse usati wasimuka, uye kuti nokukurumidza paanomuka uye pakarepo kushambidza uye kupfeka. Izvi zvinogona kutungamirirwa mberi nekuraira mutumbi kuita mamwe mabasa pane dzimwe nguva dzezuva. Munda wekuedza kwakadaro yakakura uye muviri unoita kuti utange kunyanya kuda kana aya aya anotanga kupiwa usiku usati warara.
Tinowana zvikomborero zvakawanda kubva kurara, asi kunewo njodzi.
Pane ngozi yekurasikirwa kwehutano panguva yehope. Izvi zvinogona kuva chipingamupinyi chakakomba kune avo vanoedza kutungamirira hupenyu hwemweya, asi inofanira kusangana nekukundwa. Apo kuchena kwemuviri kwakachengetedzwa kwenguva yakati, muviri iwoyo unova chinhu chinokwezva kumapoka akawanda emasangano nemafungiro e nyika isingaoneki yemanzwi. Izvi zvinosvika mumuviri usiku uye muhope chiito paanoziva kurongedza mazano emuviri womuviri, iyo inodzora mitsipa isinganzwisisiki nemisungo yepanyama. Nokuita nenzira iyi maitiro emuviri, iyo organic centers inomutswa uye inokurudzirwa, uye inoteverwa nemigumisiro isina kunaka. Kurasikirwa kwehutano kunogona kumira zvakanaka uye zvinokonzera zvichiita kuti zvidzivirire kuswedera. Uyo anoziva panguva yehope yemuviri, zvechokwadi, achengetedza maitiro ose uye masangano ari kure, asi uyo asingazivi zvakadaro anogona kuzvidzivirira pachake.
Kurasikirwa kwakakosha kunowanzowanzoguma nemafungiro ako pachako munguva yekusimudza hupenyu, kana pfungwa dzinopinda mupfungwa dzake uye kune zvaanopa vateereri. Izvi zvinogadzirisa hutano hwekugadzirisa hutano uye, semuviri wekuti somnambulistic, unongotevera unotevera hutano hwepfungwa yakashamiswa pairi. Regai iye, saka, uyo anozvidzivirira pahope anochengetedza pfungwa dzakachena mukumuka hupenyu. Panzvimbo pokuchengetedza pfungwa dzinomuka mupfungwa dzake, kana izvo zvingave zvataurwa kwaari nevamwe, ngaaite kuti avadzinge, achideredza vateereri uye kuramba kumira. Ichi chichava chimwe chezvinhu zvakanakisisa zvinobatsira nekuita kurara kunobatsira uye kunobatsira. Kurasikirwa kwehutano dzimwe nguva kunokonzerwa nezvimwe zvinokonzera kupfuura pfungwa dzako pachako kana pfungwa dzevamwe. Izvi zvinogona kudzivirirwa, kunyange zvinotora nguva. Rega munhu anotambudzika akadaro mutumbi wake kuti utaure naye kuti abatsirwe kana chero njodzi ipi neipi yaswedera, uye ngaaitewo zvakare kutsigira pfungwa yake yekuraira chero mushanyi asina kufarira kuti abve; uye inofanira kubva kana murairo wakarurama unopiwa. Kana mumwe munhu anokanganisa achionekwa muchiroto anofanira kubvunza kuti: "Ndiwe aniko?" Uye "Unodei?" Kana mibvunzo iyi ichinyatsobvunzwa, hapana sangano rinogona kuramba kupindura, uye kuzviita ivo nechinangwa chavo. Apo mibvunzo iyi inobvunzwa mushanyi, maitiro ayo akanaka kazhinji anopa nzvimbo kune chinonyanya kumira, iyo, yakatsamwiswa pakudaro inomanikidzwa kuratidzira zvayo chaiyo, zvigaro kana shrieks uye zvinonyangarika zvachose.
Takaisa pfungwa mupfungwa idzi pamusoro apa, uye kuti tidzivirire njodzi yakafanana yekurara, munhu anofanira kubvisa pane manzwiro omutsa mumoyo uye awedzere kuburikidza nemuviri wose kusvikira masero achifadzwa nemhepo inofadza. Nokudaro achiita kubva mumuviri, pamwe nemuviri sepakati, ngaafungidzire mhepo yakapoteredza kuti inopomerwa nemafungiro omutsa wehutano hwakanaka, hunobuda kubva kwaari uye huzadza zvikamu zvose zvemukati, sezvinoita chiedza chinopenya kubva kune magetsi magetsi. Ichi chichava chake chaipo, chaakakomberedza uye chaanogona kurara pasina njodzi. Dambudziko rega chete ipapo kumusangana naye richava pfungwa dzinenge dziri dzepfungwa dzake. Zvechokwadi, chiitiko ichi hachiwanikwi kamwechete. Icho chigumisiro chekuedza kwakaramba: kwekurangwa kwemuviri, uye kurangwa kwepfungwa.
Ikoko kune nyeredzi yekurara uye pane zerodhi yekumuka. Nyaya yehupenyu yekukwira inobva kune kenza (♋︎) kusvika kune capricorn (♑︎) nenzira ye libra (♎︎). Nyeredzi yekurara inobva kune capricorn (♑︎) kusvika kune kenza (♋︎) nenzira yemagetsi (a). Zuva redu rehupenyu hwekumuka rinotanga nekenza (♋︎), kufema, uye chiratidzo chekutanga chekuziva kwedu. Ndiyo kuenda kwokutanga kubva pakadzika hope pasi mangwanani kana mushure mokuzorora kwedu kwezuva nezuva. Muchiitiko ichi mumwe haawanzoziva mafomu kana kuti chero ipi zvayo yemashoko ekumutsa upenyu. Chinhu chete icho munhu anoziva ndechekugadzikana kuva. Ndiine munhu chaiye iyo inonyatsoratidzika. Kubva ipapo, pfungwa yekufunga inopfuurira kune imwezve pfungwa, iyo inomiririrwa nechiratidzo nhasi (♌︎), hupenyu. Mune mavara emamiriro ehurumende kana zvinhu zvakanakisisa zvinoonekwa uye kuderera uye kuwedzera kwehupenyu kunonzwika, asi kazhinji pasina chero chaicho chechimiro. Sezvo pfungwa dzichiwedzera hukama hwayo nemamiriro ezvinhu chaiwo inopinda muchiratidzo virgo (♍︎), fomu. Iko mune iyi mamiriro ezvinhu ekuti vanhu vazhinji vanorota pamusoro pokudzoka kwavo kuupenyu hwekumuka. Mafomu ari pano zvakajeka kuonekwa, zviyeuchidzo zvekare zvinongororwa, uye maonero anotsvaga maziso emumuviri anoita kuti mifananidzo ibudiswe pane ether yeuropi; kubva pachigaro chayo pfungwa inoona izvi zvinonzwisisika uye mazano emazwi uye inovatsanangurira mumhando dzose dzarota. Kubva pane izvi zvinorota, pane imwe nhanho yekusimudzira hupenyu, ipapo pfungwa inomutsa kumusana womuviri wayo muchiratidzo libra (♎︎), zvepabonde. Muchiratidzo ichi inopfuura mumabasa ose ehupenyu hwezuva nezuva. Mushure mekumuka kumuviri wayo muchiratidzo che libra (♎︎), zvepabonde, zvido zvayo zvinoratidzika kuburikidza nechiratidzo chinonzi scorpio (♏︎), chido. Izvi zvakabatanidzwa uye zvakashanda pane pfungwa dzinowanzosimudzira hupenyu, muchiratidzo sagittary (♐︎), chifunga, chinopfuurira kuburikidza nezuva uye kusvika panguva iyo pfungwa yekuziva inopinda mukati mayo pachayo uye inogumira kuziva yenyika. Izvi zvinoitika pachishamiso capricorn (♑︎), zvakasiyana. Capricorn (♑︎) inomiririra kurara kwakadzika uye iri pamba imwechete sekenza (♋︎). Asi apo capricorn (♑︎) inomiririra kupinda muhope huru, kenza (♋︎) inomirira kubuda kwairi.
Nyeredzi yehope inobva kuCricricorn (♑︎) kusvika kune kenza (♋︎) nenzira yemahara (a). Iyo inomiririra nyika isati yaonekwa yehope, sezvo hafu yepasi yezodhiac inomiririra nyika inoratidzirwa yehupenyu hunomuka. Kana munhu achipfuura nomunharaunda iyi isina kuratidzwa mushure mekunge atora kubva iye anozorodzwa pamumutsa nokuti uri muhope huru iyi, kana ichipfuura nenzira yakarongeka, kuti anouya achibatana nehupamhi hunhu uye mazano e mweya uye anogamuchira kurairirwa kuburikidza navo izvo zvinoita kuti iye atore basa mubasa riri kuuya neropa idzva nesimba uye kufara, uye izvo zvaanoita nekusarura nekusimba.
Nyeredzi yekurara ndiyo huni noumenal; chimiro chokumuka chinomiririra nyika inoshamisa. Muchidiodhi chekurara unhu haugone kudarika chikwangwani capricorn kana kurara kwakadzika, zvisinei kuti zvingazoguma kuva unhu. Inoramba iri munharaunda yekunyengera kusvikira inomuka kubva kune kenza (♋︎). Saka munhu oga anogamuchira zvikomborero kubva kuzindiodhi zvehope apo unhu huripo. Ihwo humwe humwe hunoyemura huno humwe humwe zvikomborero zvingagamuchirwa.
Mumwe uyo aizodzidza nezvezhiacac yekumuka nekurara, taizotarisa pamifananidzo iyo inowanzoiswa The Word. Maona The Word, Vol. 4, Nha. 6, March, 1907, uye Vol. 5, Nha. 1, April, 1907. Mifananidzo 30 uye 32 Vanofanira kufungisisa pamusoro pezvo, sezvavanenge vachiratidza kuti marudzi akawanda uye zvikamu zvekumuka nekurara zvinoshandiswa pane imwe neimwe inofamba, maererano nehutano hwake, mamiriro uye karma. Mune mbiri iyo iyo inomirira varume vana, vatatu vevarume vari mukati memurume mukuru. Inoshandiswa kune zvinyorwa zvepa pepa rino, varume vana ava vanomiririra nheyo ina dzinodarika kuburikidza nekukwira kusvika pakubata zvakadzika. Munhu muduku uye munhu wokutanga ndiye wenyama, amire mu libra (♎︎), uyo anenge asina kukwana nemuviri wake kuenda kune ndege yevirgo-scorpio (♍︎-♏︎), mafomu uye chido, chezenzi guru. Chipiri chechipiri murume wepfungwa, mukati mavo ane munhu chaiwo. Uyu murume wepfungwa anomiririra iyo inoratidzika dream dream. Izvi zvinoratidzira kurota, pamwe chete nemurume wechipfungwa, zvinongoratidzwa zviratidzo nhasi-sagittary (♌︎-♐︎) wemunhu wemweya, uye zviratidzo zvekenza-capricorn (♋︎-♑︎) wemurume mupfungwa, uye iri munharaunda iyi yenyika yepfungwa iyo munhuwo zvake anoshanda mukurota. Mune hurumende iyi linga sharira, iyo inogadzirwa kana kuti muviri womuviri, ndiyo muviri inoshandiswa uye kuburikidza neiyo kurota kunowanikwa. Vaya vakave neruzivo muzviroto vanoziva hurumende iyi seimwe umo pasina kubwinya kana mavara akasiyana-siyana. Mafomu anoonekwa uye zvishuwo zvinonzwika, asi mavara haasipo uye mafomu anoita seaya ose ehue, iyo inononoka grey kana sefomu. Izvozvi kurota zvinowanzotaurwa nemafungiro ezuva rakapfuura kana nekunzwa kwemuviri panguva iyoyo. Icho chairo chinorota, zvisinei, chinomiririrwa nezvatinazvo, munyaya dzakataurwa pamusoro, dzinonzi murume mupfungwa. Murume ane pfungwa mupfungwa dzake dzepfungwa ane vane mafungiro evanhu vepfungwa uye venyama mumashizha avo. Murume wepfungwa muodiac yake anowedzera ndege ye leo-sagittary (♌︎-♐︎), kufunga-upenyu, kwezenzi guru. Izvi zviri pandiro yekenza-capricorn (♋︎-♑︎) yemweya wezvenyika, yakasungirirwa nechepakati pemunhu wemweya. Ndiyo murume mupfungwa uyo anowedzera uye anogadzirisa zvikamu zvose zvehurota hupenyu hunoonekwa nevanhuwo zvavo. Pasi pasi pemamiriro asingazivikanwi mumwe munhu anogamuchira kukurukurirana kubva kune munhu wemweya. Murume uyu mupfungwa ndiye chokwadi chenhengo dzorota. Izvi hazvina kujeka mumunhuwo zvake, uye zvakasanzwisiswa muhupenyu hwake hunokura, kuti zvakaoma kuti aite mukati mazvo nekuchenjera uye neuchenjeri, asi ndiwo muviri waanopedza nguva yekudenga kwake mushure mekufa.
Nokudzidza mifananidzo 30 uye 32, zvichabva kuonekwa kuti gonderedzwa yakakona yakarurama inoshandiswa kune zvese zvezodhiac, imwe neimwe maererano nerudzi rwayo, asi kuti mitsetse (♋︎-♎︎) uye (♎︎-♑︎) inopfuura nese zodiacs imwe chete nhengo zviratidzo. Iyi mitsara inoratidza kubatana kwehupenyu hunokurudzira uye kuenda kwaro, kupinda mumuviri uye kusiyiwa kwaro. Mifananidzo yacho inoratidza zvakawanda kupfuura zvingataurwa nezvadzo.
Iye uyo aizobatsirwa nehope-iyo rubatsiro ichaita pahupenyu hwake hwose huchaita zvakanaka kuchengetedza kubva pamaminitsi gumi nemashanu kusvika paawa yekufungisisa asati abvisa. Kumunhu wemabhizimisi zvingaita sekutapudza nguva kutora awa yekufungisisa, kugara kwekanguva kwemaminitsi gumi nemashanu kungave kuwedzera, asi munhu mumwechete anofunga kuti maminitsi gumi nemashanu kana awa muimba yemitambo yakapfupika nguva yekubvumira iye varaidzo yemanheru.
Mumwe anogona kuwana zviitiko mukufungisisa sekupfuura kupfuura izvo zvaanofarira panhandare, sezvo zuva richipfuura muuchenjeri chiedza chisina chigadziko chemwenje wemafuta. Mukufungisisa, ivai maminitsi mashanu kana awa, regai rongororwe uye rongorore zviito zvake zvisina kururama zvezuva racho, uye dzivise zvinodaro kana zvimwe zvakadai sezviitiko mangwana, asi regai achibvumira zvinhu izvo zvakaitwa zvakanaka. Zvadaro ngavatungamirire muviri wake uye maitiro ayo maitiro sekuzvidzivirira kweusiku. Regai aonewo kuti pfungwa yake ndeyei, uye izvo iye pachake seanoziva zvinoreva. Asi regai iye azvitsanangurire uye azvigadzirise kuti ave nehanya mumarota ake ose, uye muhope dzake; uye muzvinhu zvose ngaaite kuti azvive achiziva nguva dzose, kuburikidza nehana yake, uye nenzira iyo kuburikidza nehutano hwake hwokuwana-Kuziva.